Imvunulo ejwayelekile yase-Ecuador, bagqoke kanjani? | Izindaba Zokuhamba
UMaria Jose Roldan | | América, Cultura, Izindawo zokuvakasha, Ecuador
I-Ecuador yizwe elisesifundeni sase-Andes, kuyisiko namasiko acebile, okuzophinde kugcine ngokuboniswa ezembatho ezijwayelekile ezisasebenza emadolobheni amaningi. Uyazi ukuthi yini i- imvunulo ejwayelekile yase-Ecuador?
Uma izinhlobonhlobo ezinkulu zemvunulo ejwayelekile yase-Ecuadorian zibuyekezwa, mhlawumbe icala le- izingubo ezijwayelekile zesifunda se-Otavalos Kubonakala ukusetshenziswa kwengubo ebanzi eluhlaza okwesibhakabhaka emboza umzimba futhi ebanjwa ngebhande elifekethisiwe okhalweni, ngaphandle kwezesekeli ezinjengemigexo yegolide namasongo. Izinwele nazo zihlala ziboshwe kahle, zakha umsila.
Esifundeni saseAndes ISaraguro sizokwazi ukuthola ukusetshenziswa kwama-ponchos, ngokuvamile anamathoni amnyama anokubaluleka kwamnyama, uphawu lwamandla, oluphikisana nokusetshenziswa kwezigqoko ezimhlophe nemichilo emikhulu yesikhumba.
Esifundeni sehlathi lase-Ecuador ungathola ukufana okukhulu nalokho okungaphesheya komngcele nePeru, lapho ungabona khona imigexo enemibala ngenxa yokusetshenziswa kwezimpapheNgaphezu kwalokho, uvame ukubona ama-loincloths noma izingubo eziqukethe imininingwane yazo emikhulu kwimidwebo eyenziwe kuyo.
Kepha, ingabe ufuna ukwazi kabanzi ngezingubo ezijwayelekile zase-Ecuador? Ungalahlekelwa imininingwane!
1 Izingubo ezijwayelekile zase-Ecuadorian ngokwendabuko
1.1 Izitayela ezahlukahlukene ngamasiko ahlukene
1.2 Abesifazane bemizana yasesizweni
1.3 Izizwe zehlathi elishisayo lase-Ecuadorian Amazon
1.4 Idolobha loGu
1.5 Abantu baseMontubio
2 Ugqoka kanjani uma uya e-Ecuador
3 Ungagqoka kanjani ngokusemthethweni e-Ecuador
3.1 Uma uyindoda
3.2 Uma ungowesifazane
4 Ungagqoka kanjani ngendlela evamile e-Ecuador
Izingubo ezijwayelekile zase-Ecuadorian ngokwendabuko
Izitayela ezahlukahlukene ngamasiko ahlukene
Izingubo ezijwayelekile zendabuko yase-Ecuador namanje zithandwa kakhulu emphakathini wase-Ecuador, empeleni kukhona amaqembu ezinhlanga asathenga futhi athengise izingubo zendabuko ukuze azigqoke njalo. Ngakolunye uhlangothi, kunamasiko afana ne- "los colorados" avela eSanto Domingo acishe alahlekelwa ngokuphelele izingubo zawo zesintu, futhi imvunulo yesifunda ibonwa njengokuheha izivakashi kuphela. I-Ecuador yakhiwe ngamaqembu amaningi ezinhlanga ezinamasiko namasiko ehlukene, ngakho-ke ayikho imvunulo eqondene nezwe futhi ekhethekile e-Ecuador.
Isibonelo, ingubo yendabuko yesifunda sase-Otavalos mhlawumbe idume kakhulu futhi ivame kakhulu e-Ecuador. Emiphakathini eminingana ezintabeni bagcina amasiko amaningi nezingubo zabo ezijwayelekile, njengezigqoko ezihlukile, amapiki noma amablawuzi afekethisiwe asetshenziswa kakhulu ngabantu abaningi base-Ecuador.
Abesifazane bemizana yasesizweni
Abesifazane abavela emadolobheni ehlukene e-sierra bagqoka iziketi ezinemibala egqamile nemifekethiso e-hems. Kepha imiphakathi ehluke kakhulu ingaba nokuhlukahluka kwayo kwezingubo noma izigqoko. Abesifazane bavame ukugqoka itshali loboya njengendlela yokuthwala ukuthenga noma izingane emhlane wowesifazane.
Izizwe zehlathi elishisayo lase-Ecuadorian Amazon
Izizwe ezahlukahlukene ezivela ehlathini lemvula elishisayo e-Amazon yase-Ecuador namanje zigqoke amakhanda endabuko anezimpaphe nezinye izesekeli ezinezincazelo zobuzwe noma zesizwe. Yize amalungu amaningi amancane alezi zizwe angahlanganisa noma abuyisele lezi zesekeli zezingubo ngezinye zezitayela zasentshonalanga.
Idolobha loGu liphakathi kwezintaba nolwandle, selilahlekelwe amasiko amaningi namasiko. Izingubo zabo zendabuko ezimeni eziningi azihlukile kakhulu kwezembatho zabantu bezintaba. Yize kunemiphakathi ogwini engenazo izingubo zendabuko.
Edolobheni laseMontubio (lihlanganisa izifundazwe zaseManabí, eLos Ríos, eGuayas naseSanta Elena) bagqama ngezigqoko zabo (isitayela sezinkomo) kanye imvamisa baphatha ocelembaBagqoka amabhuzu enjoloba kepha abanayo imvunulo yesiko ehambisana nawo.
Kepha njengoba kunemiphakathi eminingi ehlukene, azikho izingubo ezijwayelekile zendabuko ezihlanganisa yonke i-Ecuador.
Ugqoka kanjani uma uya e-Ecuador
Izingubo ezihlukile zabantu base-Ecuador ngokuvamile ziyinkomba yesifunda lapho zivela khona. Isibonelo, amadoda agqoke ama-ponchos aluhlaza okwesibhakabhaka, amabhulukwe abude benkonyane, nezigqoko cishe azovela endaweni yaseQuito.. Esinye isibonelo ngabesifazane base-Andes abavame ukugqoka ama-blouses amhlophe, ama-shawls anemibala namakhanda egolide namasongo abomvu e-coral. Izivakashi ezihambela e-Ecuador njengoba izivakashi kungalindelekile ukuthi zigqoke lezi zingubo zendabuko, kepha ungakwazi. Uma uthatha isinqumo sokugqoka ukuthi bakwenza kanjani, uzophathwa njengomuntu obalulekile ngokunika inani lolu hlobo lwezingubo.
Ungagqoka kanjani ngokusemthethweni e-Ecuador
Ukugqoka ngokusemthethweni e-Ecuador nokuthi ungahamba ngokwezingubo zezwe ungalandela izeluleko ezilandelayo:
Gqoka isudi emnyama nothayi emihlanganweni yebhizinisi.
Gqoka amabhulukwe nothayi uma uzosebenza enkampanini yase-Ecuador.
Gqoka amahembe ahlanganisiwe futhi uvikele izigqoko ezindaweni zokudlela noma emakhaya omndeni.
Gqoka amablawuzi, amasokisi nezithende eziphakeme kanye nesiketi noma ibhulukwe futhi kufanele uye emhlanganweni webhizinisi noma womsebenzi.
Izembatho kufanele zibe ngolondolozayo ngakho-ke azikwazi ukuqina kakhulu noma ukusika okuphansi. Iziketi kungenzeka zingabi zifushane noma zisikisele.
Ungagqoka ingubo elula, isiketi noma ibhulukwe ukuze udle ngaphandle noma uvakashele othile ekhaya. Izingubo ze-cocktail zibuye zisebenzele imicimbi ehlelekile, yize izingubo ezisikiwe ziphansi.
Ungagqoka kanjani ngendlela evamile e-Ecuador
Ukugqoka okungajwayelekile, abesilisa nabesifazane kufanele bagqoke amateki, ezemidlalo, amabhuzu okuhamba izintaba ... lokhu kwesonto kulungile. Bangakwazi futhi ukugqoka ama-sweatshirts noma ama-sweatpants ngezimpelasonto.
Omunye umqondo ukugqoka ijini entofontofo, amahembe, noma amablawuzi ukuvakashela izindawo zomphakathi. Izimpahla zokubhukuda ezilondolozayo, izikhindi, nama-flip-flops kufanele zigqokwe olwandle nasechibini.
Lezi yizibonelo ezimbalwa ze- imvunulo ejwayelekile yase-Ecuador nezingubo ezijwayelekile zesimanje ukuthi kuhle ukuthi wazi uma kwenzeka ufuna ukuya e-Ecuador futhi ugqoke ngokwendawo. Yize ngikweluleka ukuthi uzazise ngokuya ngendawo ofuna ukuya kuyo ukuze ukwazi ukuthola ukuthi hlobo luni lwezingubo ezijwayelekile yilokho abavame ukugqoka futhi ngale ndlela ungangqubuzani uma kwenzeka ufuna ukubheka izingubo ngokuya emasikweni abo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Cultura » Izembatho ezijwayelekile ze-ecuador
Isabel Sisimit Esquit kusho
Ngokusho kukaPatricia Lurssen, isithombe sabantu abasha abafake amabhulukwe anemigqa ebomvu yiso esisetshenziswa abesilisa eMnyangweni waseHuehuetenango eGuatemala. Qaphela izithombe ngoba zidala ukudideka.
Phendula ku-Isabel Sisimit Esquit
Kushibhile nini ukuvakashela amabhishi amahle kakhulu emhlabeni?